အရေးပေါ် ခဏသုံးတဲ့ စက်ထဲမှာ Microsoft Office မရှိလို့ အခက်အခဲ ဖြစ်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ နောက်တစ်ခါ တစုံတယောက်က ပေးလိုက်တဲ့ File က 2007 ဗားရှင်း (*.docx) ဖြစ်နေလို့ ဖွင့်မရတာမျိုး ဖြစ်နေတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ လိုမျိုး… လိုမျိုးတွေကို… (ထက်ထက်မိုးဦး အသံနှင့် ဖတ်ပါ… :P) အစစ အဆင်ပြေစေဖို့ လက်ထဲ ကိုင်ဆောင် သွားနေကျ မှတ်ဥာဏ်ချောင်း ထဲ ထည့်ပြီး သယ်သွားလို့ ရတဲ့၊ Install လုပ်စရာ မလိုတဲ့ Microsoft Office SP3 Portable (USB Version) လေး ဖြစ်ပါတယ်။ File Size က စုစုပေါင်း Mega Byte 130 ကျော် လေးပဲ ရှိတဲ့ အတွက် သွားလေရာ အလွယ်တကူ ထည့်သွားလို့ ရတယ်လေ။
သွားလေရာ အလွယ်တကူ သယ်သွားလို့ ရပေမဲ့လို့ File Share ဖို့ File Hosting ထဲ တင်တဲ့ခါကျတော့ ဖွက်ကလိ ဒင်္ဂါး ပေးမထားတဲ့ Hosting ဆိုလေတော့ Mega Byte ၁၃၀ကျော်ကို တစ်ဖိုင်တည်း တင်လို့ မလွယ်တာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံးလည်း Download လုပ်လို့ လွယ်စေမဲ့ Mega Byte 50 ဖိုင်2ဖိုင် နဲ့ 30 ကျော် တစ်ဖိုင် ခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Software ကို Run နိုင်ဖို့ File3File လုံးကို Download ဆွဲ Zip ဖြေဖို့ လိုပါမယ် File3File ကို Download လုပ်၊ Folder လေးတစ်ခုထဲ ထည့်ပါ။ ပြီးရင် Zip File ကို ဖြေပါ။ ရလာတဲ့ Folder လေးကို သွားလေရာ… သူငယ်ချင်းရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ချောင်းထဲ ထည့်သာ သယ်သွားပါတော့ဗျာ…
အောက်မှာတော့ ဗြိတိသျှလို ဖတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ဗြိတိသျှလို ရေးထားတာလေး ထပ်တွဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆင်ပြေ ချောမွေ့မှု ရှိမယ် မျှော်လင့်ပါကြောင်း…
Carryamicrosoft office in your usb stick and run it on every pc. A Click and Run version of MS office 2003 containing the last main update package,SP3. Besides, File Format Converters were added too. With this extension, office 2003 gains the ability to open Office 2007 documents.
Portable office contains:
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ကောင်းမကောင်းတော့ မပြောတတ်သေးပါ... ဆွဲတော့ ဆွဲသွားပြီ.... ကောင်းသော မကောင်းသော အရေးမုကီးပါ...ကောင်းသော စေတနာအား လေးစားပါတယ်..